Ny fanavaozana ny finday ho lasa finday marani-tsaina, azontsika atao ny manome hery ny fiarovan-doha mba ho fiarovan-doha hendry miaraka amina hetaheta tadiavina;
Manana injeniera mekanika matihanina, injeniera elektronika, injenieran'ny rindrambaiko izahay.
Injeniera mekanika, injenieran'ny Eletronic ary injenieran'ny rindrambaiko miasa tsy misy fangarony amin'ny alàlan'ny hazavana LED / COB, Accelerometer ary sensor miaraka amina fiarovan-doha mba hamaritana ny jiro LED mety, board PCB, tariby, bateria ary fanaraha-maso lavitra. Ho fanampin'izay, araho ny sarintany misy fiantraikany amin'ny fiarovan-doha, fitsapana ao an-trano, fanamarinana, asa amin'ny alàlan'ny tabilao isaky ny jiro LED / COB, programa iOS na APP Andorid, diniho sy tsikiho ireo bibikely, fampiharana Mandrosoa
Chips on Board (COB) dia mamela ny dian-tongotra kely kokoa rehefa manome hazavana avo lenta ary manome endrika mitovy fanamiana bebe kokoa ny jiro.
Hanome serivisy fanamboarana fiarovan-doha hendry rehetra izahay, OEM sy ODM namboarina, fiasa helemt namboarina manokana, CMT namboarina.
Ny fizotran'ny fampandrosoana ny fizarana dia mizara ho dingana manaraka manaraka:
Hatramin'ny niandohan'ny orinasa hivoahana amin'ny alàlan'ny telefaonan'ny orinasa dia nanomboka ity dingana ity. Matetika dia ny marketing manager an'ny orinasa no mifandray amin'ny orinasa. Miorina amin'ny zavatra niainany manokana, ny talen'ny marketing, rehefa avy nandamina mialoha, dia namintina ny sokajy APP inona no tokony haroson'ny orinasa, na misy fepetra takiana manokana sns. Ampirisiho ny mpandrindra ny vokatra mifanaraka amin'izany araka ny fanasokajiana ny orinasa.
2. Dingana fifandraisana
Ny mpitantana ny vokatra dia tokony hitana ny andraikitry ny tetezana amin'izany, ary hitarika ny dinidinika ho an'ny mpampiasa, ny famakafakana ny fangatahana ary ny fandinihana ny fangatahana. Karazana fampiharana inona no tadiavin'ilay orinasa hatao, karazana fiasa inona no tadiavin'ny fampiharana, karazana fomba manao ahoana no tadiavin'ny fampiharana amin'ny ankapobeny, ary iza amin'ireo sehatra rafitra tian'ilay fampiharana hampifanarahana azy. Aorian'ny fifandraisana sy fiaraha-miasa rafitra dia atolotra ny ekipa teknika hampiharana izany. Ny orinasa dia manatsara hatrany ny programa fampivoarana ny fampiharana amin'ny alàlan'ny fifandraisana.
3. Dingana famolavolana fifandraisana
Amin'ity dingana ity, ny orinasa dia namaritra ny drafitra fampiharana ankapobeny, ary niditra tamin'ny dingana famolavolana. Ny dingana famolavolana dia misy: topology dingan-dàlana, famolavolana fifandraisana eo amin'ny samy hafa, famolavolana prototype simulasi avo ary fanomezana tetika ifanakalozana. Ny famolavolana dia lohahevitra fotsiny, miaraka amin'ny fisalasalana sasany. Noho izany, amin'ny dingan'ny famolavolana dia tokony tsy ny fomba fanaon'ny orinasa ihany no tokony hodinihintsika, fa ny fanekena ny mpihaino ihany koa. Ireo lafin-javatra roa ireo dia mahatratra fifandanjana, mamorona vokadratsy mialoha ny sarintany, araka ny valiny manokana amin'ny fifandraisana amin'ny orinasa ho an'ny fanovana faharoa, ary farany manamafy ny sarintany hitan'ny maso miaraka amin'ny mpanjifa.
4. Drafitra famoronana hita maso
Amin'ny alin'ny famoronana dia matetika ny orinasantsika dia manomboka amin'ny ati-doha mba hametrahana ny làlana voalohany sy ny firindrana ny famoronana. Manaraka izany, homenay ny mpampiasa ny fahaiza-mamorona, ny takelaka pejy, ny famaritana ny famoronana sns. Rehefa tapitra ny orinasa dia ampiharina amin'ny rohy manaraka ny famoronana.
5. Dingana famokarana farany
Ny asa lehibe amin'ity sehatra ity dia ny famolavolana ny UI ary hahatsapa ny fifandraisana eo alohan'ny pejy amin'ny fiteny script Java. Tafiditra ao anatin'izany ny: famaritana ny kaody, ny fanaovana pejy ary ny firongatry ny haitao, ny fifanarahan'ny rafitra, ny fitsapana ny singa, ny fanamboarana bibikely.
6. Dingana fampandrosoana ny teknolojia.
Rehefa miditra amin'ny dingana fampandrosoana, ny safidy voalohany dia ny manombatombana ny tetik'asa mihitsy, ary manapa-kevitra mialoha ny amin'ny R&D cycle, ny fotoana fitsapana ary ny fotoana alohan'ny famoahana. Avy eo dia ny famotehana ireo asa sy fiomanana amin'ny fampandrosoana, arakaraka ny fizotry ny kaody - fampidirana ny rafitra - fanandramana ny rafitra - fanamboarana bibikely - fanaterana. Ny dingana fampandrosoana dia mila miandry am-paharetana fotsiny ny orinasa.
7. Dingana fandraisana ny mpanjifa
Rehefa vita ny fampandrosoana ny programa dia mila miandry ny fitsapana matihanina ny mpitsapa, ary ny atiny fanandramana dia ahitana ny fahombiazan'ny fampiharana, ny asany, ny atiny sns. Raha tsy misy bibikely ao amin'ilay fitsapana dia azo ekena izany. Ny asa tafiditra amin'ny fampiharana an-tserasera dia ho sarotra kokoa, ary orinasa maro kokoa no mila miara-miasa. Ny fampiharana novolavolaina dia mila dinihina rehefa alefa amin'ny sehatra tsirairay
iOS APP sy Android APP.
Fampisehoana fahazavana LED / COB ho an'ny mpanjifa
Jiro famantarana vita amin'ny endriny.
Fanaraha-maso lavitra Bluetooth.